Ụbọchị My Pet » 7 Echiche Ụgha Banyere Mmekọahụ
Ma ọ na-abịa site n'aka ndị enyi, nne na nna, porn, ma ọ bụ Hollywood, anyị nile nwere ụgha ọmụma anyị na isi banyere mmekọahụ. Luckily, anyị bụ ndị a na-enyere ghọta ndị kasị mkpari myths.
Echiche Ụgha #1: I nwere ike ịgwa a otú akamba a nwoke amụ bụ site ya akpụkpọ ụkwụ size, N'ihi na dị ka okwu na-aga “ma ọ bụrụ na o nwere nnukwu ụkwụ…”. Nke a bụ ụgha. E nwere nnọọ ihe ọ bụla mmekọrịta dị n'etiti amụ size na akpụkpọ ụkwụ size. Nke a na-aga n'ihi na aka size na ntị size.
Echiche Ụgha #2: The ibu na amụ, ihe afọ ojuju nwaanyị ga-enweta. Ụgha, size n'ezie nwere ihe ọ bụla na-eme na ego nke obi ụtọ, ya ukwuu n'ime dị nnọọ nwere ime na a nwoke ego. The G-Abù na-emi odude abụọ sentimita asatọ n'ime ikpu na ọ bụ isi nke amụ na-akpali ya mgbe na-akwaga. N'ezie, a ibu amụ abụkarị afiak okpu nditọ na G-Abù kpam kpam. Ya mere, na ozizi, size abịa ala mmasị bụghị afọ ojuju.
Echiche Ụgha #3: Ọ gaghị ekwe omume ka a nwaanyị atụrụ ime a nwa mgbe ọ bụ ugbua ime. Ụgha, a na-akpọ superfetation, nwanyị nwere ike n'ezie-atụrụ ime mgbe ime bụ ezie na ọ bụ nnọọ obere.
Echiche Ụgha #4: Alụmdi na Nwunye ga-emebiri gị mmekọahụ ndụ. Nke a bụ ụgha. Mmekọahụ, n'ezie, mma mgbe alụmdi na nwunye. Adịbeghị anya ọmụmụ na-egosi na di na nwunye nwere elu afọ ojuju, agbalị ihe iche iche n'ọnọdụ, na-enwe mmekọahụ ugboro ugboro.
Echiche Ụgha #5: Women adịghị ekiri porn. Chee echiche ọzọ. Ezie na ọtụtụ bụghị nwere ike ikweta na ọ, inyom na-ekiri ọtụtụ porn. N'oge na-adịbeghị anya nnyocha, 85% ndị inyom kwetara na ọ na-ele porn. Ya mere o yiri na ndị inyom na-ekiri ya dị nnọọ ka ndị ikom.
Echiche Ụgha #6: Ị gaghị na-atụrụ ime ma ọ bụrụ na ị na-enwe mmekọahụ na a ọdọ mmiri ma ọ bụ na-ekpo ọkụ tub. Studies gosiputara na ịbụ na a na-ekpo ọkụ tub n'ihi na ihe karịrị 30 nkeji ike belata spam ọnụ; Otú ọ dị, e nwere ihe ọ bụla na mmiri nke ọ bụla ma ọ bụ okpomọkụ chemical ọdịdị na ga-egbu anya spam. Ozugbo a spam abatakwa ikpu, ya ihe mgbaru ọsọ bụ ịchọta àkwá ifatilaiza, ihe ọ bụla ga-akwụsị ya.
Echiche Ụgha #7: Old ndị mmadụ anaghị enwe mmekọahụ. Ọ bụ ezie na ọrịa, ọnwụ nke onye òtù ọlụlụ, n'akụkụ mmetụta nke ọgwụ ndị ọzọ na-akpata pụrụ ịghọ a mgbochi, afọ anaghị akwụsị mmekọahụ. Mmekọahụ bụ a ruo mgbe ebighị ebi-ogologo oge akụkụ nke ọnọdụ mmadụ na-adịghị kpebisiri ike site afọ, ọdịdị ahụ, ike, ma ọ bụ ọtọ ikike. N'ezie, ka ọtụtụ ná ndị anọ enwe ọma n'ime agadi. Na n'elu nke, mgbe mmekọahụ ndị agadi pụrụ n'ezie inyere n'uche ma n'anụ ahụ.